ပန်ဒိုရာ: ကိတ်မုန့်တစ်လုံးကို ဘယ်လိုခွဲဝေမလဲ
ဘာဖြစ်လို့ ဆရာက ကိတ်မုန့်အသေးကလေးတွေ တယောက်တလုံး ၀ယ်မကျွေးတာလဲ။ ၀ယ်ကတည်းက တပည့်အယောက် ၂၀ အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အငြင်းပွားဖွယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ မုန့်မျိုး စဉ်းစားသင့်တယ်။
စီမံခန့်ခွဲမှု သတိလစ်လိုက်တာနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပုစ္ဆာတွေ ကပ်ပါလာတတ်တာ သင်ခန်းစာပေါ့ဗျာ။
ကိတ်မုန့်တလုံးပဲ ရအောင်ခွဲရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပဲခွဲခွဲ သာတယ် နာတယ် မရှိပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေ စားတာပဲလေ။ ကိုယ်ကတော့ ကျေနပ်ပါတယ်။
သူ့ အတွက် ဝေစုချန်ခိုင်းနေတဲ့ ဆရာက နာသုံးနာ ပြည့်ဖို့ တစ်စိတ်လိုနေသလိုပဲ။
ပို့ စ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်နာမည် က ဇာတ်ကောင် ကျောင်းသားလေးပြန်ဖြစ်သွားလိုက်သေးသကိုး။
ဆရာ့အတွက်တစ်စိတ်ချန်ပြီး နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်လို စိတ်လိုက်လဲ...
ရေတပုံးဆို ပြသနာက အဲလောက် မခက်ခဲဘူးထင်တယ်
ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ ။ တကယ်လို့သာ ဒီအဖြစ်အပျက်ထဲက ကျောင်းသားတွေဟာ တကယ် အပြင်မှာ ရှိခဲ့ရင် ၊ တကယ် အဲလို ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုရင် အဲဒီအတန်းဟာ အရမ်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အတန်းတတန်းပဲ ။
ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးက ကြည့်ထားတဲ့ သူတို့အတွေးတွေကို သဘောကျတယ် ။
ကိတ်မုန့်ထဲက ခပ်သေးသေး တစ်စိတ်စိတ်၊ လူ၁၉ယောက်ကို မျှပေး။ ကျန်တဲ့ အစိတ်ကြီးကို ကိုယ်ယူ။
Let's say your teacher bought it for $5 for that cake, I'll chip in $2.50. This entitled me to 1/2 of the cake regardless of how many people will have to share for the other 1/2. And I will divide that 1/2 piece into6equal pieces; sellapiece for 60cents.
Hey .. I make $1.10 profit!!
Too much of stock and share crisis + Tax matters make me think that way. Seriously, I have been looking at Dow Jones' Graph for sometimes now. :(
စစတုန်းကတော့ ကိတ်မုန်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်..
ကွန်မန့် ဖတ်မိတော့ ကိုဝေလင်းနဲ့ကိုမောင်ရင်တို့ ဟာကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်..
ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီလိုတွေးမိကြတာပါလိမ့်... ဒါမျိုးကို ဖောက်ထွက်တွေးခြင်းလို့ဆိုလိုလား..
ကိတ်မုန်ခွဲတာ မခတ်ပါဘူး.. ဂျစ်တူးပြောသလိုပဲ.. အတန်းက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းခဲ့တဲ့ပုံ..
ပုံရိတ်နဲ့ က သူငယ်ချင်လေနော်.. ဟဲ..ဟဲ
ဒါ Management ဘာသာရဲ့သဘောလား...။
ဒါတွေကြောင့် Management ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကို သင်ယူချင်တဲ့သူတွေ ပေါများလာတာလား...။
ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ကျောင်းသားတွေဆီက နည်းလမ်း အသွယ်သွယ်တွေ မေးပြီး နောက်ဆုံးကျတော့ မင်းတို့လုပ်ချင်သလိုလုပ် ခွဲချင်သလိုခွဲ ငါ့ဖို့တစ်စိတ် ကျန်ရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့သဘောက နာသုံးနာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်မှာ ထားရှိသင့်တဲ့ သဘောလား... မစဉ်းစားတတ်တော့ပါ...။
ဥာဏ်မမှီလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... :-P
ထောင့်အမျိုးမျိုး.. နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကနေ တွေးပြထားတာတော့ အရမ်းကောင်းတယ်...။
fair ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ချင်းစီ နဲ့ အများစု က သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်.. တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ မှာတော့ absolute fairness ကတော့ မရှိနိုင်ပါဘူး...
ကျောင်းသားတွေရဲ့ အမြင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထုတ်ဖော်ခွင့်ပေးတဲ့ ဆရာကို ချီးမွမ်းပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စင်္ကာပူက တက္ကသိုလ်တွေမှာတောင် အဲသည်လို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်မရှိလို့ဘဲ။ စင်္ကာပူက တက္ကသိုလ်တွေက အနာဂတ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ထုတ်ပေးရမဲ့အစား ဘွဲ့ရစက်ရုပ်တွေကို ထုတ်ပေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါသတဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကတောင် အင်န်တီယူက ကျောင်းသားတွေ သူတို့ ကျောင်းသတင်းစာမှာ ရေးတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးကို တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေက ဆင်ဆာဖြတ်ပိတ်ပင်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က စပီကားစ် ကော်န်နာမှာ ဆန္ဒပြကြသေးတယ်။ www.theonlinecitizen.com
အဲဒီလူကြီးက စင်္ကာပူ မကောင်းကြောင်း တော်တော်ပြောတယ်နော်... သူက ဘယ်ကလဲဟင်...
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်..အန်တီပန်ရေ..။ အဲ့လိုအတန်းလေး ရှိရင် အန်တီဂျစ်ပြောသလိုပဲ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော်။ ရှုထောင့်တွေက အတွေးတွေကို ပုံစံမျိုးစုံ ပုံဖော်စေတာပါပဲ။း)
ကိုဝေလင်း.. ဖောက်ထွက်တွေးတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် နောက်ကျသွားပြီ။ ကိတ်မုန့်က စားပွဲပေါ်ရောက်နေပြီ။ ပြဿနာကလည်း ရောက်နေပြီ။ ထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူးဗျ။
မမိုးချိုသင်း... စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ အစ်မရဲ့အတွေးလေးက ချစ်စရာပါ။
ကိုမောင်ရင် ကိုဆောင်း... ဘာလို့ ဆရာ့ကို အတင်း အနစ်နာခံခိုင်းနေလဲဗျ. မုန့်ကသူပေးတာလေ။ သူလည်း တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိဘူးလား
ပီတိ.... သိချင်ရင် မုန့်တစ်လုံး ၀ယ်လာခဲ့။ လက်တွေ့ပြမယ်။
ကိုအောင်သာငယ်... အရက်တစ်ပုံး ဆိုရင်တော့ ပြဿနာ ပိုကြီးမှာထင်တယ်။ ထပ်ဖောက်ထွက်ကြည့်တာပါ.
စု... capitalist အမြင်က မလွယ်ပါလား။ ရောင်းပိုင်ခွင့် ရှိမရှိ ပြန်စစ်ရမယ်။
တေးမွန်... မရဘူး ပို့စ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားရမယ် ပြန်ဖတ်။
မသက်ဝေ... မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးပါ. စဉ်းစားစရာတွေကတော့ အများကြီးပေါ့နော်။
အမည်မသိ... ပြောတာကို သဘောတူပါတယ်။
ကိုပေါ.. ဒီအတန်းက စင်္ကာပူက မဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲဗျ။
ဒုတိယအမည်မသိ... အနော် ကွန်မန့် ပြန်မပေးဝူးနော်။
တိုလီရေ... အဲဒီအတန်းမျိုး တနေရာမှာ တကယ်ရှိတာပေါ့။
တကယ်တော့လည်း တခြား အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာနိုင်သေးတာပါပဲ။ ကိတ်မုန့်ကို ခွဲရင် အခွင့်အရေးရမှာကို လိုချင်ဇောနဲ့ မခွဲတတ်ခွဲတတ် ခွဲလို့ ကိတ်မုန့်ပျက်စီးမှာတို့။ ဒါကတော့ ကိုယ်မလုပ်တတ်ရင် လုပ်တတ်သူကို လွှဲပေးသင့်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီ့ထက်ပိုကံဆိုးရင် ကိတ်မုန့်လှီးတဲ့ဓားကို ခွဲတဲ့နေရာမှာ မသုံးပဲ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ကိတ်မုန့်ကို အပိုင်စီးလိုက်မှာတို့ပေါ့။ လူအများကို ဝေမျှရမယ့် ကိစ္စကို မောင်ပိုင်စီး ပြီး စားချင်ရင်တော့လည်း စားပိုးနင့်မှာပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်ရမယ့် တစ်စိတ် ရသင့်ကြောင်း ကိုယ့်ဘာသာ သိဖို့လည်း လိုတယ်။
ဆရာက ကိတ်မုန့် ခွဲတတ်ဖို့ တင် သင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေကို ဘယ်အရာမဆို ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ စဉ်းစားလို့ ရတယ်။ မင်းတို့ ဥာဏ်ရှိသလိုစဉ်းစားကြဆိုပြီး သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေက လူ့ လောကကြီးမှာ အများကြီးတွေ့ နိုင်တာပဲ။ ဟော.. အခုပဲ အဝေမတည့်တော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ လူကြီးတွေ စကားများနေကြပြီ ... ဒီလိုစာသင်ခန်းမျိုးတွေလည်း မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိစေချင်ပြီ ...
ဒီပို့ စ်ကို ဖတ်ပြီး သိတ်ကျေနပ်တယိ။
ကလေးတွေကိုဗဟို ပြုထားတဲ့ problem based learning က ပွင့်လင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ အားရစရာ သင်ကြားနည်းစနစ်ဖြစ်နေတာကိုး။
ကိတ်မုန့် အပိုင်း၂၀ ပိုင်းတာထက် ကလေးတွေကို လက်တွေ့ ကျကျ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လို့ ထောင့်ပေါင်းစုံကစဉ်းစားတတ် ဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းတွေရှာဖွေစေတတ်တဲ့ သင်ကြားရေး။
အဲ့ဒီစာသင်ခန်းမှာ ဆရာက ၁၀မိနစ်လောက်ပဲပြောခဲ့မှာလေ။
ကျမတို့ ရဲ့ ဆရာပြောတာလိုက်ရေး သင်ပေးတာအလွတ်ကျက်တဲ့ ဆရာဗဟိုပြု တဲ့ ဟုတ်ကဲ့နဲ့ ခေါင်းညိတ်တတ် တာ တပည့်ကောင်းလို့ သတ်မှတ်တဲ့ ကြက်တူရွေးနုတ်တိုက်နဲ့ တော့ကွာပါ့။
အညီအမျှဖြစ်ခြင်း နဲ့မျှတခြင်းအကြောင်း အတော်တွေးလို့ ကောင်းတာပဲ..။
လေးမတော့ သိပ်ခေါင်းခြောက်မခံဘူး...တစ်ယောက်တစ်ဖဲ့ စီ လာစားလှည့်ကြလို့အော်လိုက်မယ်...။ ဟိ..။
လက်ဝဲ ကိတ်မုန့်ဝေနည်း... :D
ပထမဦးဆုံး ဂျုံခင်းကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းပါမယ်။ နောက်ပြီး မြေယာ ဝေခြမ်းရေး လုပ်ပါမယ်။ ပြီးရင် အဲဒီ စုပေါင်းလယ်ယာက ဂျုံတွေထဲက ရာခိုင်နှုန်း အနည်းငယ်ကို ရာရှင်အဖြစ် ချန်ထားစေပြီး ဂျုံကို အစိုးရကို တင်သွင်း လာတဲ့အခါ ပြည်သူတွေ အတွက် ရာရှင်တွေထဲ ရောက်မယ်။
အဲဒီအခါ ကျောင်းသား မိဘတွေက ရာရှင် အနေနဲ့ ရလာတဲ့ ဂျုံမှုန့်တွေကို အညီအမျှ စုပြီး ကျောင်းကို ယူလာရမယ်လို့ အမိန့်ထုတ်မယ်။
နောက်... အဲဒီ မုန့်ဖုတ်မဲ့ နေ့ကျ ဂျုံ ယူမလာတဲ့ ကျောင်းသားကို လူတန်းစား ညီမျှရေးကို လက်မခံသူ ဖောက်ပြန်ရေးသမား ဆိုပြီး မုန့်မကျွေးဘဲ ထားမယ်။ (အဲဒါဆို လှီးပေးရမဲ့ အစိတ် နည်းနည်း လျော့သွားတာပေါ့)
နောက် မုန့်ဖုတ်ရမှာ ၀င်မကူသူကို ဓနရှင်ဆန်ပြီး ရဲဘော်စိတ် မရှိသူတွေ အဖြစ် ထပ်ဖယ်။ နောက် စားခါနီးလို့ လှီးတော့မယ်လို့ ဆိုတဲ့အချိန် အိမ်ကနေ ဇွန်းယူလာတဲ့ ကလေးတွေ ရှိရင် လူတန်းစား ညီမျှအောင် အဲဒီ ဇွန်းတွေသိမ်း၊ နောက် အဲဒီကလေးတွေကိုလည်း ဖယ်ထားလိုက်...
အဲဒါဆို နည်းနည်းပဲ ကျန်မယ်။ အဲဒီ ကိတ်မုန့် မခွဲရခင်မှာ ထောက်လှမ်းရေးတွေက သိသွားပြီး အစိုးရက အဲဒီ တားမြစ်သော ပုဂ္ဂလိက ဇိမ်ခံမှုဆန်တဲ့ အစားအစာ ဖြစ်သော ကိတ်မုန့်ကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းလိုက်ရော...
ကဲ... မအေးဘူးလား... ဟားဟား
တော်တော်မတရားတဲ့လူတွေ.. ဆရာက ကိတ်မုန့် မြင်ထဲကသွားရေကျနေတဲ့ဟာကို...
ထူးမြတ်ရဲ့ လက်ဝဲ ကိတ်မုန့်ဝေနည်းက စနစ်အတိုင်း သဘာဝကျပါပေတယ်။ ပြောလို့မရဘူး အဲလိုခေတ်မှာ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
အမည်မသိရေ.. လာဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။